Women's health care | Macluumaad loogu talagalay qaxootiga iyo doolka | USAHello
caafimaadka dumarka iyo daryeelka caafimaadka
Waxaa muhiim ah ee qaxootiga iyo soo galootiga ah haweenka si ay u bartaan oo ku saabsan jidhkooda iyo is ogow of caafimaadka. Baro oo ku saabsan daryeelka caafimaadka dumarka qaxootiga iyo soo galootiga. Raadi khayraadka online iyo meesha aad ka heli daryeelka.
Waa maxay sababta daryeelka caafimaadka dumarka ka daryeelka caafimaadka guud oo kala duwan? Inta ugu badan ee caafimaadka qof dumar ah ayaa ku xiran iyada caafimaadka taranka iyo marxaladaha kala duwan ee nolosha. (caafimaadka taranka ka dhigan tahay caadada, isagoo dhallaanka, oo maraya dayska.)
Fahamka caafimaadka taranka iyo sida jidhkaagu shaqeeya waa talaabada ugu horeysa ee daryeelka caafimaadka dumarka wanaagsan ee.
Caadada waa wax la mid ah sida caadadu. Waa dhiig bil siilka la kulmay by haweenka da'da taranka (ku saabsan da'da 12 in 55). Caadada muujinaysaa in qof dumar ah oo uur leh ma. The times of caadada iyo xiliyada caadada dhexdooda waxaa lagu magacaabaa aad “wareegga caadada.”
Muddada la soo dhaafay ka soo saddex ilaa toddoba maalmood ah. Ka sokow dhiigbaxa siilka, laga yaabaa in aad leedahay:
La tasho bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga haddii aad hayso isbedelada weyn ee wareegga. Waxaa laga yaabaa inay calaamado dhibaatooyin kale oo waa in la daaweeyaa. badan oo ku saabsan caadada Baro.
daryeelka dhalmada ka hor waxaa loola jeedaa daryeelka caafimaad ee qof dumar ah oo ka dhakhtar helo iyada oo uur leh ah.
Waxaa muhiim ah in qof dumar ah oo uur leh si joogto ah u booqda iyada dhakhtarka si loo hubiyo caafimaadkiisa iyo caafimaadka ilmaheeda. Haddii aad uur leedahay, hubi in aad la hadasho dhakhtarkaaga goorta iyo meesha aad ka heli kartaa daryeelka dhalmada.
MedlinePlus waa meel wanaagsan oo si aad u bilowdo raadinta macluumaadka caafimaadka guud oo ku saabsan uurka. Read kooban. links Thenchoose in aad qaado si aad macluumaad ku saabsan mowduucyo kala gedisan, ka sida in ay gutaan si nabad ah in waxa ku dhacaya jirkaaga inta aad uurka leedahay.
Haddii aad uur leedahay, waa muhiim gaar ah in ay is ogow of caafimaadka, oo ay ku jiraan in ay ka taxadartaa waxa aad bay cunaan oo cabbaan iyo sida aad jimicsiga. Hubi in aad dhakhtarkaaga ku saabsan wax su'aalo ama walaac ku hadlaan in aad leedahay waxaa laga yaabaa oo ku saabsan sida si aad caafimaad. Baro sida loo is ogow of caafimaadka inta aad uurka leedahay.
Health Information Tarjumidda waa website a kaas oo bixiya macluumaadka la xiriira uurka iyo dhalmada. Dooro mawduuc in aad rabto in aad wax ka bartaan. Markaasuu, bogga xiga, dooran afkaaga.
Si aad u wanaagsan waxaa ku jira macluumaad badan oo faa'iido u leh hooyooyinka uurka leh oo ku saabsan calaamadaha iyo astaamaha shaqada. Sidoo kale, oo ku saabsan waxa aad la kulmi laga yaabaa in aad ka akhrisan kartaa haddii aad ku dhasho isbitaalka.
wanaagsan a Read muuqaalka guud ee aasaaska naas nuujinta, oo ay ku jiraan tilmaamaha ku saabsan sida loo sax ah naaska iyo sahamin ah dhibaatooyin caadi ah oo hooyooyin badan la kulmaan iyadoo isku dayaysa in ay naas-.
La Leche League waa urur caalami ah oo caawiya dumarka adduunka si guul naaska. Raadi-taliyaha La Leche League ah meesha aad degan tahay.
Ka dhig si caadi ah oo caafimaad leh inta aad naaska ilmahaaga, maxaa yeelay, wax kasta oo tagaa aad gudaha u dhaco si ilmahaaga, aad. Baro sida isticmaalka mukhaadaraadka saamayn ku naas-nuujinta.
Adeegyada dakhligoodu yar yahay dumarka uurka leh iyo hooyooyinka cusub
In Maraykanka, barnaamij la yidhaa Haweenka, Dhalaanka iyo Carruurta (WIC) caawisaa dakhligoodu hooseeyo haweenka uurka leh, hooyooyinka cusub iyo carruurtooda yaryar (ilaa in 5 sano jir ah) aad caafimaad. Barnaamijyada WIC waxay bixisaa tiro ka mid ah adeegyada, oo ay ku jiraan gargaar la naas-nuujinta, fasalada nafaqada, iyo rasiidh si ay u iibsadaan cuntada nafaqada qaar ansixiyay.
Waad awoodaa heli WIC ee gobolka. Wac lambarka telefoonka ku qoran wakaaladda WIC ee gobolka. U sheeg in aad rabto in aad ballan samaysato si aad u dalbato gargaarka WIC.
Dayska waa muddada nolosha qof dumar ah ayaa markii ay joojiyo caadada iyo waa ma sii awoodi karaan in ay carruurta. Dayska inta badan waxay dhacdaa marka qof dumar ah oo waa in 50s hore iyada, laakiin qaar ka mid ah haweenka, waa ay dhici kartaa ka hor.
Haween badan ayaa la kulmi darka qaar ka mid ah calaamadaha xun jirka intii lagu dayska. dhakhtarka A caadi ahaan kaa caawin karaa daweeyo calaamadahan. badan oo ku saabsan dayska Baro.
xaalado caafimaad qaarkood waa ka caadi in dumarka badan ee ragga. Marar badan, kuwanu waa xaalado caafimaad oo saamayn xubnaha taranka haweenka (sida naaska ama kansarka ilmo galeenka). HAY'ADAHA our, Xagganaga waxay bixisaa cad, macluumaadka cilmi ahaan sax ah oo ku saabsan jidhka dumarka iyo xaaladaha caafimaadka dumarka caadiga ah ee.
baaritaanka Caafimaadka yihiin baaritaano si loo hubiyo haddii aad leedahay xaalad caafimaad oo gaar ah. baadhitaankaas caafimaad Common waxaa ka mid ah:
Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan iyo baaritaanka guud ee caafimaadka kale, in dhakhtarradu ku talin loogu talagalay dumarka ka baran karaan Xafiiska Caafimaadka Dumarka.
goynta saxaaxa dumarka
goynta saxaaxa dumarka (gudniinka) waa dhaqan dhaqanka ee dalalka qaar ka mid ah. Inkasta oo ay jiraan dad badan oo ay dareemaan si xoog leh oo ku saabsan gudniinka sida caado dhaqameed, waa sharci darro in ay sameeyaan gudniinka ee USA. badan oo ku saabsan Baro Saamaynta caafimaadka ee gudniinka.